पर्यटकको रोजाइमा भेरी ‘कोरिडोर’ देख्न रमाइलो तर जनजीवन कठिन - Artha Dabali : nepal economic and business news portal
२०७७ कार्तिक, २८ शुक्रवार
भेरी नदीको तीरैतीर नागबेली छ सडक ।
बीचबीचमा साना बजार र कतै झरनाहरु पनि । कत्तै छाँगो परेको भेरी छ त कतै त्यसमा मिसिएका सहायक नदीहरुले बनाएका झरनाहरु पनि निकै आकर्षक देखिन्छन् ।
भेरी किनारको यात्रामा यहाँको सौन्दर्यको बयान जती गरेपनि कमै हुन्छ ।
भेरी करिडोर हुँदै सल्यानको कुपिण्डे तालमा डुङ्गा सयर र छेडागाडका माछाले भोक मेटाउँदै २०० वर्ष पुरानो जाजरकोट दरबार अवलोकन आन्तरिक पर्यटकको आजभोलिको दैनिकै हो ।
जाजरकोट सदरमुकाम हुँदै पारि जगतीपुर, मध्यपहाडी लोकमार्ग जोडिने खेतीयोग्य जमिनसँगै रुकुम पश्चिमको सिस्ने हिमालसमेत अवलोकन गर्न सकिन्छ । सदरमुकामदेखि १६ किलोमिटर पूर्वमा रहेको रिम्ना दोभान, सानीभेरी र ठूलीभेरीको संगमस्थल हुँदै रुकुम पश्चिम एवं जाजरकोट पूर्वी क्षेत्रमा प्रवेश गरी विभिन्न गल्छीहरु अवलोकन गर्न सकिन्छ ।
आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरु हिजोआज यीनै रमणीयस्थलको यात्रा गर्न पाउँदा निकै खुशी देखिन्छन् भन्छन्, नलगाड उद्योग बाणिज्य संघ जाजरकोटका अध्यक्ष कर्णबहादुर खत्री । उनले भने, “नजिकको तीर्थ हेला भनेझैं हामी खास महत्व दिदैनौँ तर यहाँ के छैन र ?
हामीले भएका संरचना र बस्तुलाई सही रुपमा संरक्षण गर्न सकेमा स्वर्ग यहीँ छ ।”
भेरी कोरिडोरले डोल्पाको सदरमुकामसम्म कच्ची कटानसँगै यातायातका साधन सञ्चालनमा आएपछि यहाँको महत्व ह्वात्तै बढेको सडक निर्माण कार्यदलका प्रमुख विश्ववन्धु पहाडीले बताए । उनले भने, “सेनाले ज्यानको प्रवाह नगरी निर्माण गरेको यो सडक तीन देशको मुख्य राजमार्ग हो । सेनाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ, अब सडक विभागले यसको देखदेख गर्नेछ ।
यो सडक निर्माण गर्दा थुपै्र खुशी तथा पीडाहरु सम्झना बनेर बसेका छन् ।” करिब ११८ किलोमिटर सडक जाजरकोटदेखि डोल्पाको दुनैसम्म रहेको छ । यो सडक भेरी नदीको किनारै किनार दर्जनौँ पुल पुलेसा तर्दै दुनै पुगिन्छ । बाटोमै जङ्गली जनावारहरुको अवलोकन समेत गर्न सकिन्छ ।
शेफोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज माथि छ र प्राचीनकालमा निर्माण भएका गुम्बाका साथै लोपोन्मुख भाषा काइके (काइके गाउँ) समेत यही रुटका नागरिक बोल्ने गर्दछन् । विश्वको अग्लो ठाउँमा रहेको धो उपत्यकाका साथै शे गुम्वा, फोक्सुण्डो ताल समेत यहाँका मुख्य आकर्षण हुन् । दर्जनौँ हिमालय रहेको उपल्लो डोल्पामा ६ महिना हिउँले ढाक्ने गर्दछ ।
बहुमूल्य जडीवुटीको भण्डार रहेको यहाँ सवैको आम्दानीको मुख्य स्रोत समेत यही हो । अहिले यो ठाउँमा पर्यटकको ठूलो भीड लाग्ने गरेको छ । निकुञ्जका प्रमुख सरोजमणि पौडेलका अनुसार पछिल्लो समय संरक्षणका कामले राम्रो गति लिएको छ । यहाँका सम्पदा संरक्षण गरेमात्र दीगो विकास र अर्को पुस्तालाइ नासो समेत राख्न सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा पनि यहाँ विकास भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको हिमाली जिल्ला डोल्पा प्राकृतिक रुपमा जती सुन्दर छ, त्यतिकै रुपमा यहाँको बसाइ भने कठिन छ । छिमेकी मूलक चीनसँग सिमाना जोडिएको डोल्पा भूगोलका हिसावले नेपालकै ठूलो जिल्ला हो । निकै कम उत्पादन हुने यस जिल्लाले बढी मात्रामा खाद्यान्न आयात गर्ने गर्दछ ।
प्राकृतिक रुपमा पाइने औषधि र जडीवुटीको भण्डारको रुपमा स्थापित यो जिल्लाका सर्वसाधारणहरु हिउँदमा चिसोबाट ज्यान जोगाउन गाउँ छोडेर तल्लो भेगमा झर्ने गर्दछन् भने चैत महिनादेखि वर्षायाममा उपल्लो डोल्पामा बस्छन् । भूगोलमा हिसावले उपल्लो डोल्पा, मध्यडोल्पा र तल्लो डोल्पा गरी तीन भागमा विभाजन गरिएको छ ।
यहाँका सबै प्रशासकीय केन्द्रहरुमध्ये डोल्पामा पर्दछन् । उपल्लो डोल्पामा चिसो भू–भाग मात्र होइन आम्दानीको हिसावले बहुमूल्य यार्सागुम्वादेखि भारी जडीवुटीहरुको भण्डार नै रहेको छ । पर्यटकीय गन्तव्यका हिसावले उपल्लो डोल्पा नै आकर्षणको केन्द्र मानिन्छ । शेफोक्सुण्डो तालदेखि निकुञ्जको अधिकांश भाग उपल्लो डोल्पामा पर्दछ ।
झट्ट हेर्दा दुनियाँको आँखामा अति आकर्षक सेताम्य हिमालहरु पनि उपल्लो डोल्पामा नै पर्दछन् । भोट क्षेत्रका रुपमा पनि परिचित उपल्लो डोल्पामा अधिकांश जनजाति समुदायका वौद्धमार्गीको बसोबास रहेको छ । पुस्तौं पुराना गुम्वा र प्राचीन महत्वका मूर्तिहरुले उपल्लो डोल्पाको खास पहिचान दिलाउने गर्दछ ।
बाह्रै महिना आफ्नै घरमा बस्ने कसलाइ पो रहर हुँदैन र ? तर उपल्लो डोल्पाका अधिकांश सर्वसाधारणहरु बाह्रै महिना उपल्लो डोल्पा (आफ्नो घर) बस्न पाउँदैनन् । चिसो मौसम शुरु हुननसाथ घर, आँगन नै पुरिने गरी हिमपात हुने भएकाले आफूहरु तल्लो क्षेत्र झर्ने गरेको डोल्पोवुद्ध गाउँपालिका –६ का सालिम लामाले बताए ।
उनले भने, “ चिसो छल्ने बहानामा वर्षायाममा सङ्कलन गरिएका जडिवुटीको व्यापारदेखि खाद्यान्न जम्मा गर्ने काम गरिरहेको छौँ, हामीसँग अरु विकल्प पनि त छैन ।”
बिरामी हुँदा सिटामोलसम्म नपाइने हाम्रो ठाउँमा पहुँच र पैसा भएकाले हेलिकोप्टर उडाएर ज्यान बचाउँछन् तर गरिबले भने मृत्यु कुरेरै बस्नुपर्ने बाध्यता भएको अर्का स्थानीयवासी धावन गुरुङले पीडा पोखे ।
पल्लो डोल्पाको सबै ठाउँमा फोनको नेटवर्क हुँदैन, विरामी भएमा स्थानीय लामालाई ल्याएर जंगली जडिवुटीको भरमा उपचार गर्नु उपल्लो डोल्पाको अर्को विकल्प भएको छ । उपल्लो डोल्पामा तीन र भित्री डोल्पामा एक स्थानीय तह रहेका छन् ।
कृषि यहाँका मानिसको प्रमुख व्यवसाय हो । गाई वस्तु, भेडाबाख्रा पाल्नु तथा खेतीपातीमा निर्भर रहनु यहाँको दिनचर्या जस्तै हुन्छ । हिमाली भेगमा जडिवुटीको प्रशस्त सम्भावना भएको हुनाले वैशाख, जेठको गर्मी समयमा गाउँका बलिया र अनुभवी युवाहरु अग्ला अग्ला पहाडमा यार्सागुम्वा टिप्न जाने गर्दछन् ।
यार्सागुम्वाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो मूल्य भएकोले यहाँको मानिसको यो सामान्य आयको माध्यम यार्सागुम्वा नै हो । यसरी टिपेको यार्सागुम्वा तिब्बती व्यापारीहरुमार्फत् चीनतिर लैजाने गरिन्छ । यार्सागुम्वा झण्डै ४ हजार मिटरभन्दा माथिका पहाडहरुमा मात्र पाइने भएकोले थुप्रै चुनौतीहरुलाई स्वीकार्दै त्यहाँ जानुपर्ने बाध्यता यहाँका स्थानीयवासीहरुको रहेको छ ।
धेरै अग्ला हिमालमा अक्सिजनको कमी हुने भएकोले कतिपय मानिसलाई लेक लाग्ने सम्भावना भएकाले त्यहाँ स्थानीय जडिवुटी साथमा लिएर सङ्कलन गर्ने यहाँका स्थानीयवासीहरु बताउँछन् । लगातार हिउँ परिरहने र गर्मी यामका एक दुई महिना मात्र हिउँ पग्लने भएकोले उपल्लो डोल्पाका पहाडहरुमा बोटविरुवा कम हुने गर्दछन् ।
रुख विरुवा नभएका अग्लो हिमालमा यात्रा गर्दा लडेर मृत्यु हुने सम्भावना पनि उच्च रहेको सर्वसाधारणको भनाई छ । चिसो मौसममा उपल्लो डोल्पाका प्रहरी चौकीहरु समेत सदरमुकाम दुनैमा सार्ने गरिएको छ ।
माथिल्लो भेगमा वस्ने मानिसद्धारा जङ्गली जनावरहरुको अवैध चोरी शिकारी अत्यधिक मात्रा हुने गरेको सुरक्षा अधिकारीहरु बताउँछन् । विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने डोल्पा अत्यन्त पछाडि रहेको स्पष्ट देख्निछ ।
जुफाल विमानस्थल र जैरीघाट साना जलविद्युत आयोजना बाहेक अन्य अर्थपूर्ण भौतिक संरचनाहरु डोल्पामा छैनन् । जैरीघाट साना जलविद्युत आयोजनाले भने जिल्ला सदरमुकाम र जुफाललाई विद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ ।
शेफोक्सुन्डो ताललाई गन्तव्य बनाएर डोल्पाको पर्यटन विकासलाई थप विकास गर्न सकिने विज्ञको तर्क छ । जीवविहीन यो ताललाई हरियो र नीलो रङ्गको अनुपम मिश्रणले रङ्गाएको देखिन्छ । आकाशमा सूर्यको स्थानसँगै यता तालको पनि रङ्ग फेरिन्छ । एउटा प्रचलित किंवदन्तीअनुसार यो तालभित्र प्राचीन गाउँको अवशेष देखिन्छ ।
शेफोक्सुन्डो नेपालको सबैभन्दा गहिरो ताल हो । शेफोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा यो ताल र शे गुम्बा छ । उपल्लो डोल्पामा पर्ने यो गुम्बा विश्वका प्रमुख १२ बौद्ध गुम्बामध्ये एक मानिन्छ । विष्णुप्रसाद शर्मा पराजुलीद्वारा लिखित ‘डोल्पो विश्वको जीवित सङ्ग्रहालय’मा समेत डोल्पाको व्यख्या गरिएको छ ।
डोल्पाबारे जनकलाल शर्माले विसं २०३१ मा ‘कौतुकमय डोल्पो’ र घटराज भट्टराईले २०३९ सालमा ‘डोल्पाकी छोटी’ पुस्तक लेखिसकेका छन् । तर दुई वर्षअघि ‘तिब्बत यात्रा’ लेखिसकेका पराजुलीको यो ‘डोल्पो’ नेपाली साहित्यमा डोल्पाकेन्द्रित पहिलो यात्रा निबन्ध हो । माथिल्लो डोल्पाको अनुपम सौन्दर्यलाई विदेशीले पनि यात्रा र कृतिमा समेटिसकेका छन् ।
शे–गुम्बा, थोसाङ गुम्बा, शे–फोक्सुन्डो ताल, नीलो भेडा, नीला सल्ला, हिमचितुवा, कस्तुरी, मृगले यो क्षेत्रको नेपालको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यस्तै यहाँको संस्कृतिले हाम्रो समाजको विकास र उच्च सभ्यताको चिनारी पनि दिने सांसद पहाडीको तर्क छ । संस्कृति र परम्परामात्र होइन, प्रकृति र प्राकृतिक स्रोतबारे पनि उत्तिकै सशक्त ढङ्गगले उठाउन सकेमात्र डोल्पाको विकास र समृद्धिमा थप टेवा पुग्ने पहाडीको भनाई छ । –हेमन्त केसी जाजरकोट